Dhageeyso markii ugu horaysay taariikhda xaflad noocan oo kale ay ka dhacdo gudaha magaalada Baydhabo tan iyo taxanaha sooyaalka taariikheed ee dowladnimada Soomaaliya ay bilaabatay qarnigii labaatanaad oo ku began sanadkii 1960kii xiligaasoo soomaalida ay ka qadatay xoriyadeeda dowladihii gumaysiga reer yurub ee ingiriiska iyo talyaaniga. 6-11-2016 | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageeyso markii ugu horaysay taariikhda xaflad noocan oo kale ay ka dhacdo gudaha magaalada Baydhabo tan iyo taxanaha sooyaalka taariikheed ee dowladnimada Soomaaliya ay bilaabatay qarnigii labaatanaad oo ku began sanadkii 1960kii xiligaasoo soomaalida ay ka qadatay xoriyadeeda dowladihii gumaysiga reer yurub ee ingiriiska iyo talyaaniga. 6-11-2016
written by warsan radio 06/11/2016
Xafladda ayaa ahayd mid ka duwan xafladihii horay loo qaban jiray. Waxay ahayd xaflad lagu shaaicinaya musharaxnimada xilka madaxwaynaha dowlada federaalka soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hada ah madaxweynaha dowlad goboleedka koofur galbeed soomaaliya. Waxaa kasoo qayb galay xaflada wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya,xildhibaano ka tirsan dowlada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo baarlamaankakoofur galbeed soomaaliya,odoyaasha beelaha ,ururada dhalinyarada, hobalada koofur galbeed soomaaliya iyo marti sharaf kale.
Dhageeyso markii ugu horaysay taariikhda xaflad noocan oo kale ay ka dhacdo gudaha magaalada Baydhabo tan iyo taxanaha sooyaalka taariikheed ee dowladnimada Soomaaliya ay bilaabatay qarnigii labaatanaad oo ku began sanadkii 1960kii xiligaasoo soomaalida ay ka qadatay xoriyadeeda dowladihii gumaysiga reer yurub ee ingiriiska iyo talyaaniga. 6-11-2016 was last modified: November 6th, 2016 by warsan radio
Akhriso:-Maxaa bari laga filan karaa Baarlamanka maxaase la gudboon madaxweyne Farmaajo?
Daawo: Dowladda oo go’aan ka gaartay arrinta Qalbi Dhagax “VIDEO”